Wasiirka Arrimaha Dibadda Maamulka Riyaale Oo Dafiray In Wada-hadalo U Socdaan Dawladda Soomaaliya | Somaliland.Org
Wasiirka Arrimaha Dibadda Maamulka Riyaale Oo Dafiray In Wada-hadalo U Socdaan Dawladda Soomaaliya
April 27, 2009	Hargaysa (Somaliland.org) Wasiirka arrimaha dibadda maamulka Daahir Riyaale ee wakhtigiisu dhamaaday Cabdillaahi Maxamed Ducaale ayaa maanta beeniyay hadal ka soo yeedhay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Oomaar oo sheegay in dawladda Somaliland diyaar u tahay wada hadal, xidhiidh fiicanina u socdo.
Cabdillaahi Maxamed Ducaale oo shir jaraa’id ku qabtay xafiiskiisa Hargaysa ayaa sheegay in aanay waxba ka jirin hadalada uu sheegay Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu beeniyay guddoomiyaha waqooyiga Ameerika ee xisbiga UDUB Yuusuf Dable, kaas oo sheegay in maamulka Riyaale iyo maamulka Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay wada hadalo badani u socdaan.
Guddoomiyaha waqooyiga Ameeriga ee xisbiga UDUB ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu la kulmay raysalwasaare ku xigeenka ahna wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo socdaal ku joogay waqooyiga Ameerika.
Xisbiyada mucaaridka ah ee Somaliland ayaa baryahan dambe ku celcelinayay in dib u dhaca doorashooyinka Somaliland ay salka ku hayaan arrimo la xidhiidha dawladda Soomaaliya loogu soo dhisay dalka Jabuuti, isla markaana maamulka Daahir Riyaale uu sugayo inta ay cagaha isku taagayso dawladda Soomaaliya ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed.